Wararka ka imanaya gobolka Shabeellada Hoose ayaa sheegaya in kolonyo ay la socdeen Guddoomiye C / qaadir Siidii iyo saraakiil sarsare oo ka tirsan milatariga Soomaaliya qarax miino lagula eegtay deegaanka Tixsiile oo u dhexeeya degmooyinka Afgooye iyo Wanlaweyn ee maamulka Koonfur Galbeed.
Al-Shabaab ayaa sheegatay mas’uuliyadda qaraxa waxaana ay ka warbixisay dilka afar askari iyo dhaawaca taliyaha ciidamada gaarka ah ee Danab iyo sarkaal kale, laakiin illaa iyo hadda ma jiraan warar madax bannaan oo xaqiijinaya sheegashada al-Shabaab.
Ilo wareedyo ku dhow Milatariga Soomaaliya ayaa xaqiijiyay in Taliyaha Ciidanka Danab Gaashaanle Axmed C / laahi Nuur “Beeryare” iyo sarkaal kale uu dhaawac fudud soo gaaray, laakiin gudoomiyaha iyo ciidamada kale ee la socday kolonyada ay badqabaan.
Saraakiishan ayaa intaa ku daray in dhaawacyada saaka loo qaaday magaalada Muqdisho ee caasimada Soomaaliya si loogu dabiibo.
Beeryare oo horay ula soo shaqeeyay saraakiisha Ahlu sunna ee gobolada dhexe ayaa waxaa loo magacaabay taliyaha ciidamada gaarka ah ee Danab bishii October ee sanadkii 2020 kadib markii laga qaaday taliyihii ka horeeyay ee gaashaanle ismaaciil cabdimaalik macalin oo xilka hayay mudo ka yar hal sano.
The Worst Manner Your Weight loss program Can Age Your Face,